Igumbi lokulala elikhulu kwiKhaya eliMnandi eliTofotofo
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguBarbara & Robert
Yiza uhlale kweli khaya lakhiwe kwilali yase-Illinois. Eli khaya likwindawo enemithi, enomlambo ozolileyo, kunye nezilwanyana zasendle ezininzi zenza kube mnandi ukubuya kwempelaveki. Kumgama wokuhamba ukuya eBoggio's Orchard kunye nemizuzu engama-20 kuphela yeendwendwe zokuhamba ezinokufikelela kwiipaki zombuso ezimangalisayo, ezinje ngeStarved Rock kunye neMatthiessen, ezibonelela ngeemayile kunye neemayile zokuhamba okumangalisayo kunye neendlela. Uya kuba negumbi lakho labucala elinebhedi elingana nokumkanikazi.
Iindwendwe ziya kuba negumbi lazo lokulala labucala kunye negumbi lokuhlambela (elicandiweyo). Igumbi lokulala linebhedi elingana nokumkanikazi, idesika, igunjana elinama-hangers, kunye ne-44 inch Smart TV. Igumbi lokuhlambela elikhulu elinesibhakabhaka kunye nebhafu yebhafu ye-combo. Kukho amagumbi amabini esiwarentayo kwikhaya lethu kwaye igumbi lokuhlambela liza kwabelwa ngalo ukuba elinye igumbi liqeshwe ngomnye umntu. Igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela zombini zikumgangatho ophezulu kwaye izitepsi zibekwe kanye ngaphakathi komnyango wangaphambili ukuze iindwendwe zingahambeli endlwini ukuze zifikelele kwigumbi lazo.
4.94 · Izimvo eziyi-141
Ikhaya lethu likwilali yaseGranville ecaleni kwebhoda kunye nelali yaseMark. Indawo ikhuseleke kakhulu kwaye inobuhlobo kunye neendawo ezintle kakhulu edolophini. Sinekati ezimbini zendlu ezichitha ixesha elininzi lexesha lazo emini kwaye zinendawo yazo eyahlukileyo endlwini.
Umbuki zindwendwe ngu- Barbara & Robert
Ukusebenzisana kwemikhosi kuya kuba kuninzi (okanye kuncinci!) Njengoko kufunwa lundwendwe! Ukuba ufuna indawo "yabucala" yokubaleka, sinokuba ncinci kakhulu endlwini. Okanye, ukuba ufuna iingcebiso kulo mmandla - Sizimisele kakhulu ukunika iingcebiso, kwaye sifumaneke ngamaxesha onke! Ukuba ungathanda isidlo sakusasa esilungiselelwe wena ngexesha lokuhlala kwakho, sikulungele ukukunyanzela!
Ukusebenzisana kwemikhosi kuya kuba kuninzi (okanye kuncinci!) Njengoko kufunwa lundwendwe! Ukuba ufuna indawo "yabucala" yokubaleka, sinokuba ncinci kakhulu endlwini. Okanye, ukub…
UBarbara & Robert yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Granville